သမီးစံ: January 2012
(ဓာတ်ပုံ - မိစံ)
ကွက်ကျော်ဘုရားဖြစ်နေပြီ(အစ်ကိုနေ၀သန်က) ပြောလို့..တင်ပေးလိုက်ပါတယ်း)
တရုတ်တန်းဘက်ရောက်တော့..လူတွေစုရုံး..စုရုံးဖြစ်နေတာနဲ့ ၀င်ပြီးစပ်စုကြည့်ပါတယ်း)
ကျွန်တော်တို့အဖွဲ့နာမည်ကတော့..မနှစ်က ဒုတိယဆုရခဲ့တဲ့ “Lion King” ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာတဲ့
(ကိုယ်က ကြည့်ချင်တဲ့သူဆိုတော့လည်း သည်းခံရပါတယ်း)
ကိုယ်တိုင်တော့ လက်မအားလို့.မတီးဖြစ်လိုက်ပါဘူးး)
ဒီဘက်ပြီးတော့ ဟိုဘက်ကို..လှည့်ပြပါတယ် :)
Year of Birth: 1912, 1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020
Year of Birth: 1915, 1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023
Year of Birth: 1916, 1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024
Year of Birth: 1918, 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026
Year of Birth: 1920, 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016, 2028
Year of Birth: 1922, 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018, 2030
Year of Birth: 1923, 1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019, 2031
ဆူးလေစေတီ နှစ်တစ်ရာပြည့်ပွဲတော်ပါ။ တစ်နေ့က“စ”တယ်လို့သိရပါတယ်။
သိသိချင်း သတင်းသွားယူခဲ့ပါတယ်း)
ပုဇွန်ကြော်ငါးရာ ဂဏန်းကြော် တစ်ထောင်ပါတဲ့
(ပိုက်ဆံကို စက္ကူများအောင်းမေ့လေရော့သလားမသိး)
ကိုယ်က အစားသမားဆိုတော့...း)
စားစရာတွေချည်း ရွေးရိုက်ခဲ့ပါတယ်း)
သိကြပြီးသား “ထမနဲ”ပါ။မြည်းခဲ့ပါတယ်း)။(သိပ်)မကောင်းပါဘူး
(နှစ်ကျပ်ခွဲသားမရလို့ တစ်ဆယ်သားဝယ်ခဲ့ပါတယ်း)
ကင်မရာလည်းချိန်လိုက်ရော “ရိုက်ပြီဟေ့..ရိုက်ဟ” တဲ့း)
“အစ်မလေးနော် စားကြည့်နော်၊တစ်အားကောင်းတယ်နော်၊ တစ်ပွဲသုံးရာတည်းနော်” တဲ့
(အာလူး၊ပဲ၊ဆမူဆာ ပူရီပါ ...ဈေးချိုတာ သူပဲရှိပါတယ်း)
(ထိုင်ပြီးရင် ပြန်မထချင်တော့လို့း)
ကဲ..တစ်ယောက်တစ်ရုပ် ယူစေဗျားး)
သူ့မြင်တော့လည်း မစီးပဲမနေနိုင်ပြန်း)
(ဘာကြောင့်ရယ်တော့မသိ ဓာတ်ပုံရိုက်ရင် တယ် မကြိုက်ချင်ကြပါဘူး)
23 ရက်နေ့ တရုတ်နှစ်ကူးမို့ (သွားရင်းလာရင်းကားလမ်းပိတ်တာနဲ့ကြုံရင်) ရိုက်ပြီး တင်ပေးလိုက်ပါ့မယ်း)။
(နောက်ထပ်တိုးလာရင်တော့..လက်ဇက ဖြစ်မယ်ထင်ပါတယ်း)
လူ့ဘ၀ဆိုတာ ဆီးဆော့ပေါ် လမ်းလျှောက်နေတာနဲ့တူတယ်။
အမြဲပဲနိမ့်ရာကနေ မြင့်ရာကို စလျှောက်ရတယ်။
ခြေတစ်လှမ်း လှမ်းတိုင်း နောက်တစ်လှမ်းက အရင်တစ်လှမ်းထက်
အမြင့်ကိုရောက်လေ တည်ငြိမ်ဖို့ ခက်လေဖြစ်တယ်။
သင့်ကိုသင် အမြင့်ကိုရောက်နေပြီလို့ ထင်တဲ့အချိန်ဟာ
ကုန်းဆင်းကို သင်စ ဆင်းနေပြီဖြစ်တယ်။
ဒါကြောင့် သင်ရောက်ချင်တဲ့အမြင့်မှာ ဘယ်တော့မှ
တည်ငြိမ်မှတ်ကို သင်ရှာမတွေ့မချင်း အမြင့်မှာ ရပ်နိုင်ဖို့ဆိုတာ
ဘယ်လောက်ခက်ခဲကြောင်း သင်အကြိမ်ကြိမ် တွေဝေပြီးမှ
ဘ၀ရဲ့ တည်ငြိမ်မှတ်ကို ရှာတွေ့မှ အဲဒီနေရာသာလျှင်
အမြင့်ဆုံးဆိုတာကို တစ်နေ့နေ့ တစ်ချိန်ချိန်မှာ
အဲဒီ့လို အမြင့်ဆုံးမှာ ရပ်နိုင်ဖို့ သင့်မှာ တခြားနည်းတစ်ခု
အဲဒီ့လူတွေက သင့်မိသားစု၊သင့်ချစ်သူ ဒါမှမဟုတ်
( နိုင်းနိုင်းစနေ ဘာသာပြန်သည်။)
သမီးစံအတွက် ဟိုတစ်ဖက်မှာတော့ ...
at January 21, 2012 26 comments:
(ဒီကဗျာကို သူရေးပြီးစ..တုန်းက..အစ်မ ငါတင်ရင်ကောင်းမလားတဲ့...း)
at January 17, 2012 21 comments:
(ကဲ...တစ်နေ့တာတက်ပို့ထဲက မင်းသမီးပုံလည်း ကြည့်လို့ဝသွားလောက်ပြီယူဆပါတယ်း)
တစ်လောတုန်းကသမီးစံတစ်ယောက်အတော်မူးသွားပါတယ်။အကြောင်းကတော့..ဆယ်တန်းအောင်လက်မှတ် ပျောက်သွားလို့ပါ။(အံ့သြစရာနော်)ဘွဲ့လက်မှတ်တောင်မကိုင်ရသေးဘူး။အောင်လက်မှတ်ကပျောက်ပြီ။အဲဒါတောင် သင်တန်းတစ်ခုတက်ဖို့.အောင်လက်မှတ်လိုတယ်ဆိုလို့..ပြန်ရှာမှသိတာ။ဆိုးချက်က..တာတေကိုလန်ရောနော်။(ဘယ် သူမှမပြောခင်.အရင်ပြောထားရတား)။ပျောက်တယ်ဆိုတော့..အသည်းအသည်ပြန်ရှာရတာပေါ့။ဒေါင်းတောက်အောင် ရှာလည်းမတွေ့၊ဘယ်မှာထားမိတယ်..စဉ်းစားပြန်တော့လည်း အဖြေကထွက်မလာပါဘူး။ဒီတော့ အသစ် လျှောက်ရုံပဲရှိတော့တာပေါ့။(ကိုယ်က.အမြန်လိုနေပြီကိုး)အဲ့ဒီ့မှာ..စတွေ့တော့တာပဲး)
လက်မှတ်ပျောက်ပြီဆိုတော့ ထုံးစံအတိုင်း လသာစာစစ်ဌာနကို သွားရတာပေါ့။ဟိုရောက်တော့ ငွေ နှစ် ရာ့ ငါးဆယ်နဲ့(လက်မှတ်ပျောက်လျှောက်ဖို့)ဖောင်တစ်စောင်ဝယ်ရပါတယ်။ပျောက်သွားတာကိုပြန်လျှောက် ရ တာဆိုတော့ သူများလို ဖောင်ဖြည့်ပြီး ပြန်တင်ခဲ့လို့မရပါဘူးတဲ့။ လိုအပ်တဲ့စာရွက်၊စာတမ်း တွေကို ဖြည့် ရ မယ့်ဖောင်ထဲမှာထည့်ပေးထားပါတယ်ဆိုလို့ဖတ်ကြည့်လိုက်တော့.(အောင်လက်မှတ်) အမှန်တကယ် ပျော က်ဆုံးကြောင်းကျမ်းကျိန်လွှာ၊ပြီးတော့(သက်ဆိုင်ရာ)ပညာရေးမှူးထောက်ခံစာ၊(အောင်လက်မှတ်)ပျောက်ဆုံးကြောင်းတိုင်ချက်ဖွင့်ထားတဲ့(ရဲစခန်းက)စာတဲ့။ဘယ်ကစလို့.ဘာလုပ်ရမှန်းတောင်မသိတော့အောင်ရှည်လျှား၊ ထွေပြားနေတော့(လူပျက်တွေပြောသလိုပါပဲ “ဟေး. . လို့တောင်.မအော်နိုင်တဲ့အဖြစ်”း)။
ဒီတော့..ကိစ္စမြန်မြန်ပြီးအောင်ရွာပြန်ရုံပေါ့။သန်လျင်ရောက်တော့ပညာရေးမှူးဆီအရင်ဝင်ပါတယ်။စာရေးမလေးနဲ့ပဲတွေ့ပါတယ်။ဘယ်နှခုနှစ်ကအောင်တာမို့ပျောက်ရတာလဲတဲ့ (မေးလည်းမေးချင်စရာပါ)။ကိုယ်လည်းထောက်ခံစာလေးရအောင်ရှဉ့်လည်းလျှောက်သာပျားလဲစွဲသာဖြေရတာပေါ့း)။ဒီတော့မှ(နည်းနည်း)ကြည်သွားပြီးတော့ကျမ်းကျိန်လွှာနဲ့ရဲစခန်းကစာပါရင်ထောက်ခံစာပေးမယ်ဆိုပါတယ်။
ပြောသာပြောရတယ်ရဲစခန်းဆိုတာလဲသွားလို့ကောင်းတဲ့နေရာတော့မဟုတ်တဲ့ထဲမှာပါတယ်။ဟိုလည်း ရောက်ရောစခန်းမှူးကြီးကအော်ပါလေရောကွယ်။ကျုပ်တို့များကိုးဆယ်ခုနှစ်ကတည်းကဆယ်တန်းအောင်တာ အောင်လက်မှတ်ကခုထိရှိသေးတယ်တဲ့။ကြည့်လည်းလုပ်ဦးလက်မှတ်ပျောက်ရာကနေကြာရင်လူပါပျောက်ဦးမယ်တဲ့ ကောင်းချီးထောပနာပြုပါတယ်။မှားတဲ့သူဆိုတော့လည်း (ဘာပြောပြော) ငြိမ်ခံ နေရ တာ ပေါ့။ကိစ္စပြီးလို့ ကိုယ်လက်ထဲစာရွက်ရောက်တော့“ဆရာ..လက်ဘက်ရည်ဖိုးပါ”(ဆိုပြီး)ပေးတော့“ရတယ်.သွား. .သွား” တဲ့။ မယူဘူးတော်.(ဒါလည်းအံ့သြစရာ) အလကားလုပ်ပေးလိုက်ပါတယ်။
ရဲစခန်းကထွက်တော့ ကျမ်းကျိန်လွှာလုပ်ဖို့ တရားရုံးဘက်သွားရပါတယ်။(သူလည်းသွားလို့ကောင်းတဲ့ နေ ရာထဲမှာမပါပါဘူး)တရားရုံးမှာအစ်မသူငယ်ချင်းရှိတာဆိုတော့သူ့ဆီပဲတန်းသွားလိုက်ပါတယ်။ဘာကိစ္စလည်းညီမလေး မေးတော့ လာရင်းကိစ္စပြောပြလိုက်ပါတယ်။ ကျမ်းကျိန်လွှာကလုပ်ထုံးလုပ်နည်းအ တိုင်း ဆိုတစ် ရက် တည်း နဲ့မရဘူးညီမတဲ့။ပြီးတော့တရားသူကြီးကိုလည်းပေးရသလိုလက်နှိပ်စက်စာရေးကိုလည်းပေးရပါသတဲ့။ပိုကုန်မှာဆိုတော့ ရန်ကုန်က(ဘားလမ်းမှာ)ပဲလုပ်လိုက်ပါတဲ့။
တစ်နေ့တည်းနဲ့ကိစ္စမြန်မြန်ပြီးသွားချင်တာမို့ ရန်ကုန်ကိုပြန်သွားပါတယ်။ရန်ကုန်ရောက်တော့ အဆင် ပြေ သွားပါတယ်။ဒါပေမယ့် ကျမ်းကျိန်လွှာက ညနေမှ ရမယ်ဆိုတော့ နောက်တစ်နေ့မကူးချင်ပေမယ့်လည်း ကူး ရတာပေါ့။(အတော်ဆိုးပါတယ်)
နောက်တစ်နေ့ ကျမ်းကျိန်လွှာကော၊တိုင်စာပါ လက်ထဲရောက်တော့ ပညာရေးမှူးဆီ ပြန် သွား ရပါ တယ်။ ဟိုလည်းရောက်ရောပညာရေးမှူးနဲ့တိုးတော့(ရှယ်)ရစ်ပါတယ်။(စာရေးမဘက်စစ်ကူတောင်းတော့လည်းမသိသလိုနေပါတယ်) အောင်လက်မှတ်ဆိုတာပျောက်သွားရင်တစ်နှစ်နေမှရတာနားမလည်ဘူးလား၊ဘယ်သူကညည်းကိုထောက်ခံစာယူခိုင်းလိုက်တာလဲတဲ့။(သူ့စာရေးမကို)လသာကိုဖုန်းဆက်လိုက်စမ်း ဘာညာနဲ့ရစ်သကွယ်။ပထမတော့ကိုယ်လည်းရိုရိုသေသေပါပဲ။သူကပြောတော့ကိုယ်လည်းပြောတာပေါ့။သမီးစံတို့ စိတ်ကြီးတယ်နော်း)။(ပညာရေးမှူးဆိုတာတော့ဆယ်တန်းထိပဲသူပြောချင်သလိုပြောလို့ရတာလေ)ကိုယ်လည်းအေးဆေးပဲ တက္ကသိုလ်ကကျောင်းသားကဒ်ထုတ်ပြလိုက်တယ်။ကျောင်းကတောင်းတာမို့အမြန်လိုလို့တစ်နှစ်မစောင့်နိုင်ဘူးဆိုတဲ့အကြောင်း ပြောပြလိုက်ပါ တယ်။ (ခပ်တည်တည်ပါပဲး)
အဲ့တော့မှ..နည်းနည်းလျှော့သွားတယ်။(အစကတည်းက ရေးပေးလိုက်ရင်ပြီးတဲ့ဥစ္စာ) ပျောက်သွား တယ် ဆို တဲ့ အကြောင်းစာရေးပြီးလက်မှတ်ထိုးလာခဲ့တဲ့(ထပ်ရစ်ပါသေးတယ်။)လက်ရေးနဲ့မရဘူးကွန်ပျူတာစာစီမှတဲ့ တော်တော်ရစ်တဲ့ပညာရေးမှူးပါ။ကွန်ပျူတာဆိုင်ရောက်တော့မီးကလာပေမယ့်လူကမလာသေးပါတဲ့ရှင်။ကိုယ်တိုင်ဝင်ရိုက်မယ် ပြောလိုက်ရင် တော်တော်မယဉ် ကျေးရာရောက်မှာမို့ (နာရီဝက်လောက်)စောင့်လိုက်ရပါတယ်။စာစီ ပြီးလို့ ရုံးပြန်ရောက်တော့ဘိုးတော်ဘုရားကအပြင်ပြန်ထွက်သွားပါသတဲ့။(စိတ်မရှည်တော့ဘူးအဲလိုပဲခေါ်လိုက်တော့မယ်း)ထပ်ပြီးစောင့်ရပြန်ပါတယ်။(တော်တော်ကြာစောင့် ပြီးလို့)ပြန်ရောက်လာတော့(ကြည်ကြည်ဖြူဖြူပါပဲ)ပျောက်သွားတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းထောက်ခံစာမှာလက်မှတ်ထိုးပေးပါတယ်။ကိစ္စပြီးတော့ ကိုယ်လည်းအကျင့်ပါနေတာမို့(စာရေးမလေးကို)လက်ဖက်ရည်သောက်ဖို့ဆိုပြီးပေးတော့မကြားသလိုနေပါတယ်။ (အဲ့လိုမျိုးတွေများများမြင်လာရတော့စိတ်ချမ်းသာပါတယ်။)ဒီတော့ဒီထောက်ခံစာလည်းဖရီးရခဲ့တယ်ဆိုပါတော့..း)။(ပညာရေးမှူးရုံးတော့ နော က် ဆုံးအကြိမ်ရောက်ခဲ့ခြင်းပါ။သူ့လည်း မသွားသင့်တဲ့နေရာထဲ စာရင်းထည့်ထားလိုက်ပါတယ်။
အားလုံးအဆင်ပြေသွားတော့လသာကိုဖောင်သွားပြင်အဲလေတင်ရပါတယ်း)။တစ်ပတ်နဲ့အမြန်လိုချင်ရင်စာရေးပြီးတင်ပါတဲ့။သူကျတော့ လက်ရေးနဲ့ပဲတင်ပါတဲ့။အဆင်ပြေပါတယ်ကိုယ့်ဘာသာသင့်သလိုရေးပြီးလက်မှတ်မြန်မြန်လိုချင်ပါတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်း ရေးပြီး တင်ခဲ့လိုက်ပါတယ်။
တစ်ပတ်ပြည့်လို့လက်မှတ် (မိတ္တူ)ထုတ်ပြီး တော့ အစ်ကိုတော်က မေးတယ် “နင် ကဘာ လို့အောင် လက် မှတ်နှစ်ခုဖြစ်တာလဲ”တဲ့။ပျောက်သွားလို့ပါဆိုတော့“နင့်အောင်လက်မှတ်ငါ့ဆီမှာလေ”တဲ့။ဟောတော်..ကလေးတုန်းကလိုပဲ မြေကြီးပေါ်အားရပါးရထိုင်ပြီးဗြဲဗြဲလို့သာအော်ငိုပလိုက်ချင်ပါတော့တယ်(မငိုတတ်လို့သာ.း)ကိုယ်ပဲပေးထားပြီး ကိုယ်ပဲမေ့နေတာလေ။တစ်ယောက်မကျန်လိုက်မေးမိရင်ကောင်းသား။ခုတော့..အချိန်လည်းကုန်လူလည်းပန်း၊အောင်လက်မှတ်နှစ်ခုနဲ့အရူးစံဖြစ်နေပြီ:P။ဒီကြားထဲမ ကိုင်လိုက်ရတဲ့ကျမ်းကြီးစူးသွားရင်တော့..(ဖလား..ဖလား)မတွေးရဲစရာနော်။(ငွေနဲ့ပေးဝယ်လိုက်ရတဲ့အတွေ့အကြုံဆိုပါတော့)
လွန်ခဲ့တဲ့ရက်အနည်းငယ်က(အတိအကျပြောရရင်ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ကပါ)သမီးစံရဲ့(ရှစ်တန်းထိခင်ခဲ့ဖူးတဲ့)သူငယ်ချင်းတစ်ယောက် ကားမတော်တဆဖြစ်ပြီးရုတ်တရက်ကွယ်လွန်သွားပါတယ်။အရင်တုန်းကတည်းကဒီလိုမျိုးအဖြစ်တွေခဏခဏကြားနေရပေမယ့်ကိုယ်မသိတဲ့အသိုင်းဝိုင်းကဆိုတော့ဘာသိဘာသာပါပဲ။ခုတော့အနေနီးရုံမက သက်တူရွယ်တူသူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ဆုံးရှုံးသွားရင်းကြားလိုက်ရတဲ့သတင်းဆိုတော့(သိသိသာသာကို)တုန်လှုပ်သွားပါတယ်။စာရေးလို့ညာညောင်းရင်ဘယ်နဲ့ရေး ဘယ်ညောင်းရင်ညာနဲ့ပြန်ရေး၊တစ်ခါတစ်လေဘယ်ရော၊ညာပါပြိုင်ရေးနိုင်အောင်ထူးခြားတဲ့သူငယ်ချင်းမ.လေးပါ။ပြောရင်းနဲ့တောင်သူ့မျက်နှာလေး မြင်ယောင်လာပြီကွယ်း(။သုံးမိနစ်ပဲခြားတဲ့အမွှာမောင်လေးတစ်ယောက်နဲ့စုစုပေါင်းနှစ်ယောက်တည်းရှိတဲ့တစ်ဦးတည်းသောသမီးပါ။ကိုယ်တောင် စိတ်မကောင်းတော်တော်ဖြစ်နေတာသူ့မိဘတွေဆိုရင်တော့ဆိုဖွယ်ရာမရှိတော့ပါဘူး။သူငယ်ချင်းသတင်းကြားပြီးမှ သမီးစံလည်းအပြင်သွားတိုင်းကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်သရဏဂုံမတင်ဖြစ်တာတော်တော်ကြာပြီမှန်းသတိထားမိပါတယ်။ အချိန်မရွေး၊နေရာမရွေး(မထင်ရင်မထင်သလို)ခေါ်တတ်တဲ့“သေမင်း”ကိုမမြင်ဖူးပေမယ့်ကြောက်သလိုလိုရှိလာပါပြီ။ဒီတော့ ဘုရားပုံမှန်မရှိခိုးနိုင်၊တရားဘာဝနာများများအားမထုတ်နိုင်ပေမယ့်(ကြုံရင်ကြုံသလို)ဒါန၊သီလ၊ဘာဝနာရိက္ခာလေးများများစုဖြစ်ပါတယ်။အလှူခံလာရင်လည်းခေါင်းမခါပါဘူး:P။တရားပြပေးသွားတဲ့သူငယ်ချင်း ကိုလည်း ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။သူငယ်ချင်းကောင်းရာသုဂတိ လာပါစေ။
စဉ်းစားမိရင်းတမလွန်လောကနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပုံပြင်လေးတစ်ပုဒ် သတိရသွားပါပြီး)။
တစ်ခါတုန်းကရွာတစ်ရွာမှာအလွန်ချစ်ခင်ကြတဲ့လယ်သမားကြီးတို့ဇနီးမောင်နှံနှစ်ယောက်ရှိပါတယ်။တစ်နေ့တော့ လယ်သမားကြီးကလယ်ထဲသွားရင်းပိုးထိပြီးကွယ်လွန်သွားပါတယ်။ဒီတော့သူ့ကိုအင်မတန်ချစ်တဲ့သူ့ဇနီးခများ ပူဆွေးဝမ်းနည်းရတာပေါ့။ပြီးတော့သူအင်မတန်ချစ်တဲ့တမလွန်ဘ၀ကလယ်သမားကြီးကိုဘယ်ဘ၀၊ဘယ်အခြေနေရောက်နေလဲဆိုတာ အရမ်းသိချင်နေရှာပါတယ်။ဒီလိုနဲ့နေလာတာတစ်နှစ်လောက်နေတော့သူ့ဆန္ဒလေးပြည့်သွားပါတယ်။သူတို့ရွာကို ရောက်လာတဲ့နတ်ဆရာကြီးတစ်ယောက်ကြောင့်ပါ။ဒီနတ်ဆရာကြီးက တမလွန်ဘ၀ကို ကူးပြောင်း သွားတဲ့ သူမှန်သမျှခေါ်ပေးနိုင်တဲ့အစွမ်းရှိလို့ပါတဲ့။လယ်သမားကြီးရဲ့ဇနီးလည်းအားကိုးတကြီးသွားမေးတာပေါ့ကွယ်။
ဟိုလည်းရောက်ရောနတ်ဆရာကြီးကလယ်သမားကြီးဇနီးမေးတာကိုအာရုံခံပြီးကြည့်ပါတယ်ခဏနေတော့ခေါင်းကို(တွင်တွင်)ရမ်းပါတယ်(သူမပြောဘူးပေါ့ကွယ်)ပြီးတော့ လယ် သမားကြီးရဲ့ဇနီးကို လယ် သမားကြီး ဘယ်ဘ၀၊ ဘယ်အခြေနေ ရောက်နေတယ် ဆိုတာ “မသိချင် ပါနဲ့တော့”လို့ဆိုသတဲ့။ဒီလိုပြောတော့ဇနီးသည်ခမျာလယ်သမားကြီးအခြေအနေတော်တော်ဆိုးတယ်ထင်ပြီး ၀မ်းနည်းသွားပါတယ်။ပြီးတော့နတ်ဆရာကြီးကိုလည်းတောင်းပန်တယ်။ဘယ်လိုအခြေနေမျိုးပဲရှိရှိသူစိတ်ခိုင်ပါတယ်။ ပြောသာပြောပါပေါ့။နတ်ဆရာကြီးကလည်းအကြိမ်ကြိမ်ငြင်းပါတယ်။မပြောပါရစေနဲ့ပေါ့။လယ်သမားကြီးရဲ့ဇနီး ကလည်းအကြိမ်ကြိမ်တောင်းဆိုပါတယ်(ဟိုသူနဲ့ဟိုသူတို့လိုပေါ့း)။နောက်ဆုံးတော့နတ်ဆရာကြီးလည်းလက်လျှော့သွားပြီး လယ်သမားကြီးရဲ့ဇနီးသည်သိချင်တဲ့လယ်သမားကြီးရဲ့ဘ၀ကိုပြောပြလိုက်ပါတယ်။
အင်မတန် မအားမလပ်ဖြစ်နေတယ်ဆိုတာ ဒီပုံက သက်သေပါး)
မနေ့က(ဆယ့်သုံးရက်နေ့သောကြာနေ့)နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေအများကြီးလွှတ်ပေးတယ်လို့သိရပါ တယ်။သမီးစံလည်း အားလုံးနည်းတူ ၀မ်သာပျော်ရွှင်ရပါတယ်။ဘလော့ဂါ ကိုနေဘုန်းလတ်လည်း ပါတယ် လို့သိရတဲ့အတွက် ထပ်ပြီးပျော်ရပါတယ်။လူကိုတော့ မနေ့ကမှ မြင်ဖူးတာပါ။ ကိုယ်နေတဲ့လမ်းထဲက ဓမ္မာ ရုံ နားမှာနေတယ် ကြားရတော့ တစ်နေ့လောက်သွားဗျူးရင်ကောင်းမလားလို့း)
ကိုယ်တိုင်လည်း..ခလေးစီးဖြစ်တဲ့..အမျိုးသမီး rocker တွေပါ။
(ပို့စ်ကလည်း ဘယ်လိုမှ justify လုပ်လို့မရပါဘူး။ဒါကြောင့် တစ်စစီကျိုးပဲ့နေတဲ့
စာပိုဒ်တွေအတွက် သည်းခံပြီး ဖတ်ပေးစေချင်ပါတယ်ရှင်။)
ဟိုနေ့က..သမီးစံဆီကိုစာတစ်စောင်ရောက်လာပါတယ်။ရေးထားတဲ့စာအရတော့“ရာထူးတိုး.ပရိုမိုးရှင်း” ထင်ပါတယ်။း)
♠ မနက်စာကို ဘယ်လိုအစားအစာ စားရတာကြိုက်ပါသလဲ
♠ လောလောဆယ်နေ့တိုင်းစားဖြစ်နေတဲ့ မနက်စာ...
► (စားတော်)ပဲပြုပ်နဲ့ထမင်းကြော်..(အဆင်ပြေတဲ့နေ့ဆို..ကြက်ဥအုပ်ပါတယ်း)
♠ နေ့လည်စာကို ဘယ်လိုနေရာမျိုးမှာစားရတာကြိုက်ပါသလဲ
►ကျောင်းသွားတော့..ကန်တင်းမှာပဲပေါ့၊ကျောင်းပိတ်ရင်တော့..အိမ်မှာပဲစားပါတယ်။ဘယ်နေရာစားစား အဓိက..ထမင်းဝင်ဖို့ပဲ..မဟုတ်ပါလားရှင် :P
► ငါးသလောက်ပေါင်း၊ ငြုပ်သီးစိမ်းချက်(ငါးသေတ္တာနဲ့)၊ချဉ်ပေါင်ကြော်၊၀က်စွပ်ပြုတ်း))
♠ အလုပ်မှာကော်ဖီ ဘယ်နှစ်ခွက် သောက်ပါသလဲ
♠ ညနေစာစားရင်းနဲ့ အများဆုံးစဉ်းစားဖြစ်တတ်တဲ့ အကြောင်းအရာ
►ပြီးရင်..စက်ရှေ့ထိုင်တော့တာပဲ(အနည်းဆုံး.တစ်နာရီး)။ပြီးမှ တခြားအလုပ်လုပ်တယ်။
♠ အိပ်မပျော်တဲ့ညတွေမှာ ဘာလုပ်သလဲ
♠ တအားစိတ်ဓါတ်ကျလာတဲ့အခါမျိုး စိတ်အားငယ်တဲ့အခါမျိုးတွေမှာ ဘာလုပ်တတ်သလဲ
►အေးချမ်းတိတ်ဆိတ်တဲ့နေရာကိုသွားနေပါတယ်။ (တစ်ခါတစ်လေလည်းဘုရားရိပ်တရားရိပ်ဖြစ်သလိုတစ်ခါတစ်လေလည်းရေကန်ဘေးတို့တံတားပေါ်တို့ဖြစ်နေတတ်ပါတယ်ဝမ်းနည်းမှုအကြီးအသေးပေါ်မူတည်တာပေါ့း)
♠ အပြင်သွားတဲ့အခါ အမြဲတမ်းသတိထားပြီးယူတတ်တဲ့ပစ္စည်း
► ကင်မရာ၊ပိုက်ဆံအိတ်၊ပြီးတော့..လွယ်နေကျအိတ်(အပြင်သွားတိုင်းတခုခုမလွယ်ရရင်မနေတတ်လို့း)
♠ မိသားစုဝင်တွေထဲမှာ အချစ်ရဆုံးသောလူ
♠ သူစိမ်းတွေအထဲမှာ မိမိအယုံကြည်ရဆုံးသူ
► မရှိ(သေး)။ :D
► နည်းနည်းများတယ်။(တစ်ခုမှကိုမရှိတာ)း))
► ကိုယ့်ကို..ချစ်လို့၊ခင်လို့ပေးတာဆိုတော့..အကြိုက်ဆုံးရယ်လို့မရွေးဖြစ်ပါဘူး။(ရွေးပေးလိုက်ရင် ကျန်တဲ့သူတွေငိုကုန်လိမ့်မယ်။ :P)
♠ ကိုယ့်ပတ်သက်ဖူးတဲ့သူတွေထဲမှာကိုယ့်ကို နားလည်ခွင့်လွှတ်ပေးနိုင်ဆုံးသူ
► ကုက္ကိုင်းမှာရေကူးသင်တန်းတက်ချင်တယ်(မဲနေတဲ့အသား..ပြာသွားမှာလဲစိုးပါတယ်း)
ပျော်ပျော်ပါးပါးလေးမို့ရေးပေးစေချင်ပါတယ်ရှင်။မြိုင်မြိုင်ဆိုင်ဆိုင်၊ချစ်ချစ်ခင်ခင်လေးဆိုတော့ တက်ပို့စ် ပိုင်ရှင်လည်း..ပျော်သွားတာပေါ့။.း))
အစ်မရွှေစင်ဦး၊ အစ်မခင်ဦးမေ၊ အစ်မကျော်နှင်းဆီလွင်
အစ်မမယ်သံ၊အစ်မဗေဒါ၊ အစ်မရို့စ် (ကျမဘ၀၏အမှတ်တရနေရာလေးတစ်ခု)
အန်ကယ်ဘကြိုင်၊ အစ်မလမင်း၊ အစ်မမိုးခါး၊ အစ်မသက်နန္ဒာ
မြတ်ကြည်၊ အိပ်မက် ၊ Mishell
အန်ကယ်ဇော်၊ အစ်မသဒ္ဓါ ၊ ကိုအိပ်ရာ
မောင်ကျူးပစ်၊ မောင်ဒု၊ သန်လျင်သား
at January 07, 2012 28 comments:
သားသမီးများများနဲ့စည်းစည်းလုံးလုံးနေရတာကို..သဘောကျနှစ်ခြိုက်သူနဲ့အကြောင်းပါခဲ့ပြီး ခလေးမချစ်တတ်ပေမယ့်..တစ်ဒါဇင်ထိအောင်..မွေးပြီး.တညင်သူပီပီ“ရှင်မွေးလွန်း”ဘွဲ့ကို.အလိုလိုပိုင်ဆိုင်ခဲ့တဲ့ အမေ...း)
(အဖေ့ရဲ့)အစိုးရလစာ..မလောက်မငလေးနဲ့..စလယ်ဝင်အိုးကနေ..ရာဝင်အိုးထိအောင်.(ကြီးလာတဲ့ စားအိုး အတွက်).ခြိုးခြံချွေတာ..လောက်င အောင်နေပြီး.(မောင်တစ်ထမ်း၊ မယ်တစ်ရွက်နဲ့) အိမ်ရှင်မကောင်းပီသ ခဲ့တဲ့အမေ...
ကျောင်းဖွင့်ချိန်ဆို(တိတ်တိတ်လေး)သက်ပြင်းချနေရပေမယ့် ကျောင်းအပ်အတိုင်း(အမြဲတမ်း) တစ် ယောက် ခ.လျှော့လျှော့ယူတတ်တဲ့ကျောင်းအုပ်ဆရာမကြီးရဲ့ဂရုဏာကြောင့်(တစ်ယောက်ခသက်သာလဲမနည်းဘူးဖြေသိမ့်တွေးရင်း)အသက်ရှုချောင်တတ်ခဲ့တဲ့အမေ...
သားသမီးတွေ..အချိန်တန်..အရွယ်ရောက်တော့မှ..အလှူရေစက်..လက်နဲ့မကွာလှူရင်းတန်းရင် (အေးအေးဆေးဆေးနဲ့)ဘ၀နေ၀င်ချိန်..ရင်ဆိုင်တော့မယ်ဆိုမှ(သားကြီးလိုပဲ).ခွဲခွာသွားတဲ့ ခင်ပွန်းအတွက်.ထပ်ပြီး..၀မ်းနည်းခဲ့ရပြန်တဲ့..အမေ
သားသမီးတွေက.နာမည်ဘယ်လိုခေါ်လည်း..ဘယ်သူပြီးရင်..ဘယ်သူလဲ(သူများတွေက)မေးရင်..(ခုချိန်ထိ) ကိုယ်တိုင်ပေးခဲ့တဲ့နာမည်တွေကိုတောင်စဉ်းစားရင်းဖြေနေရအောင်..မေ့တတ်လာတဲ့..အမေး)
မနက်လေးနာရီထိုး.(အမေမွေးတဲ့အချိန်ပါပဲ) အစောကြီး..အဝေးကနေမွေးနေ့ဆုတောင်းပေးတဲ့ သားတစ်ယောက်နဲ့ သမီးတစ်ယောက်ကို.. ဘယ်လောက်သိတတ်ကြောင်း.. လူလာတိုင်း.. ပြော ပြော နေ လို့ အမေ့ကြည့်ပြီး..ပြုံးရပါသေးတယ်း)
မုန့်ဖိုးများများပေးနိုင်ပါစေ လို့........း)
at January 05, 2012 29 comments: